Ogaden News Agency (ONA) – Faallo: Saraakiisha ONLF Uma Heelana Inay Ku Raaxeystaan Guryo Muraayado Ah & Kuraasi Xardhan Toona- By: Xaaji M/rashiid
Faallo: Saraakiisha ONLF Uma Heelana Inay Ku Raaxeystaan Guryo Muraayado Ah & Kuraasi Xardhan Toona- By: Xaaji M/rashiid
Posted by ONA Admin	/ October 9, 2018
Ilaahay SWTC wuxuu insaanka uqadaray inuu halgamao intuu aduunka joogo, taa micnaheeduna ma aha inuu mar walba dagaal kujiro ee nolosha ayaa sideedaba kudhisan halgan. Kasoo qaad inaad subixii toostay, hadaad shaqo aado waa noo halgan ah, hadaad waxbarasho aadana waa halgan nooc kale ah. Intaasi waa tusaale, balse wax loo dhqaaqaa majiro ilaa wuxuu noqonayaa nooc halgameed nolosha saamayn kuleh.
Hadaan ararta intaa kudhaafo waxaa Gobolada Geeska saaqay hadal haynta isbadalka kuyimid guud ahaan wadanka loogu yeedho Itoobiya, gaar ahaana Mandiqada Ogadenya oo ah degaanka soomaalida ee itoobiya ku hoos jira. Waa isbadal uu dadka qaarba nooc uga faa’iideysanayo. Dadka qaar waxay ku farxsanyihiin inay beerahooda iyo xoolahooda si nabd ah ku dhaqdaan, qaar waxay doonayaan inay tijaaradoodu unabad gasho meeshay doonaana ay la maraan. Qaar kale waxay doonayaan inay siyaasadda meel ka xuluushaan si ay u helaan wax afkooda buuxiya, si kastaba ha ahaatee waxaa dhab ah inayna dadka gobolku isku wada han ahayn, isku aragtina ka ahayn isbadalka dhacay.
Waxaa jira Urur ONLF la yidhaaho oo leh taageerayaal aad ufarabadan isla markaana ka kooban dhamaan bulshada qeybaheeda kala duwan. Markiiu isbadalku dhacay ee wadankii latagay maxay ku talaabsadeen, waa su’aal ubaahan in laga jawaabo. Waxay cagta saareen safarro dhaadheer iyo abaabul joogto ah iyagoo qabtay shirar waawayn. Hadaad ufiirsateen lama isticmaalaynin Guryo muraayado ah, lagumana fadhiyin Kuraasi xardhan oo dhaadheer. Waxay wufuuda iyo taageerayaashuba tubnaayeen dhulka banaan ee caadiga ah, isla mar ahaantaas aad bay u riyaaqayeen, wajiyadoodana farxad baa buuxisay.
Hadaan hal kulan tusaale ahaan usoo qaato waa Gabogabo iyo siday wax u dhaceen. Iyadoo la ogyahay meesha ay qadiyadu ka mareyso caalamka dhexdiisa ayaa wufuudii halganka loo waabay Geed taarikhda gali doona, maryana lagu wareejiyay, sidoo kalana dadkii darmo loo dhigay. Waxaas oo dhani waxay muujinayaan heerka wadaniyadu ay ka joogto Saraakiisha ONLF. Way jiraan magaalooyin waawayn iyo goobo qurxoon oo ku yaala, laakiin waxay umuuqdaan inayna dan wayn kalahayn kol hadii ayna gacanta ku haynin xorriyad buuxda. Waxaa kale oo meeshaas laga fahmi karaa inay tixgalin wayn uhayaan dadka reer baadiyaha oo ah meesha kaliya ee halganku kadhiman waayay! Wufuuda oo qaar badani ay qurbaha katageen ayaa umuuqda kuwo ku raaxeysanaya inay ciida hooyo salka saaraan!
Hadaan uleexdo dhanka mustaqbalka iyo hamiga Saraakisha Halganka waxaabad moodaa inay u shaqeynayaan oy nolol midan kuduwan udiyaarinayaan jiilalka soo socda. Waxaad moodaa inayna iyagu lafahooda uturanin uguna talo galin wax raaxo ah. Waxaad moodaa inay iska dhigeen Hangoolka xananka iyo geedaha la iskaga qabto ee mar walba isagu dhibnaha ah oo kale, meesha ninkii lahaa uu isagu mar walba xagtinta ka badbaadayo. Wuxuu hadalku u dhacaya in bulshada ree ogadenya iyo jiilalka soo socda loo furayo irid nololeed oy uqaadaan wado loosii hagaajiyay!
Marxaladan hada lamarayo oo bilow ah waxaan umada soomaalida ogadenya urajeynayaa inay farxadu isu raac,raacdo ilaahay idankii, sidoo kale waxaan ilaahay Cazza Wajalla kabaryi inuu Saraakiisha Onlf ee samirka badan gacanta ugaliyo Guul dhameystiran oo deg deg ah, isla markaana uu makansiiyo gurashada midhaha halgankooda- Aamiin.